छिनछिनमा पिसाब लाग्ने सम’स्या छ ? हुनसक्छ यस्ता घा’तक रोगको सं’केत – Annapurna Daily
छिनछिनमा पिसाब लाग्ने सम’स्या छ ? हुनसक्छ यस्ता घा’तक रोगको सं’केत
On Oct 1, 2021 9,776
काठमाडौँ । कहिले काही पटक-पटक पिसाब लाग्छ। यसको एउटा मात्र कारण हुँदैन। सामान्यतः धेरै पानी वा तरल पदार्थ पिएको बेला पिसाब लाग्छ, जो स्वभाविक हो। त्यस्तै कहिले मानसिक कारणले समेत पिसाब लागेको अनुभव हुन्छ। गर्भावस्थामा वा बुढ्यौलीमा पनि धेरै पटक पिसाब लाग्छ, जसलाई सामान्य मानिन्छ।
के हुनसक्छ ? पटक पटक पिसाब आउनुको कारण मुत्रनली वा मुत्राशयको संक्रमण हुनसक्छ। त्यस्तै मृगौलाको कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा पनि पिसाब रोकिदैन, पटक पटक आइरहन्छ। मुत्राशयउको अत्याधिक सक्रियताको कारण पटक पटक पिसाब लाग्छ। मधुमेहको कारण पनि पटक पटक पिसाब लाग्छ । रगतमा वा शरीरमा शुगरको मात्रा बढेपछि यस्तो समस्या आउन सक्छ । यदि यूरीनल ट्रैक्ट इन्फेक्सन छ भने यस्तो समस्या झेल्नुपर्छ। प्रोस्टेट ग्रन्थी बढेमा पनि पटक पटक पिसाब आउने समस्या हुन्छ।मृगौलामा संक्रमण भएमा धेरै पटक पिसाब आउँछ।